Sida loo sameeyo nadiifiyaha gacmahaaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo sameeyo nadiifiyaha gacmahaaga
Sida loo sameeyo nadiifiyaha gacmahaaga
Waxay u muuqataa in sida ugu wanaagsan ee aad gacmahaaga ugu nadiifin karto oo aanay fayraska lahayn ay tahay in si habboon loogu dhaqo saabuun iyo biyo. Laakin haddii aadan tagi karin saxanka, gacmo nadiifiyaha ayaa sameyn doona khiyaamada (mar kale - haddii si fiican loo isticmaalo). Nadiifiye-gacmeedka ayaa weli ah mid loo baahan yahay, marka waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad keligaa garaacdo.
Oo haddii aad gacantaada ku heli karto maaddooyinka caadiga ah ee loo baahan yahay, runtii way fududahay inaad samayso gacmo nadiifiye DIY ah.
Habka nadiifiyaha gacmaha ee DIY-ga ah (.pdf) wuxuu si toos ah uga yimaadaa Ururka Caafimaadka Adduunka. Iyadoo loogu talagalay farmasiyada kuwaas oo si ballaaran u soo saari doona alaabta, way fududahay in la yareeyo tirada isticmaalka guriga. Dhab ahaan, Science Popular sidaas sameeyay. Waxaad u baahan doontaa inaad u soo qaadato PDF-kaas cuntada dhabta ah. Ma rabo in aan halkan ku qoro, kaliya in uu hadhow beddelo oo aan ka tago aniga oo talo xun bixinaya. Taasi waxay tidhi, waxay u egtahay qaacido si fiican loo aasaasay.
Si aad u samayso nadiifiyaha gacmahaaga, waxaad u baahan tahay ethanol ama isopropyl aalkolo, oo lagu daray hydrogen peroxide si loo sameeyo dilka dhabta ah. Kadibna, waxaad u baahan tahay glycerol, si aad u noqoto jel. Ugu dambeyntii, waxaad u baahan tahay biyo nadiif ah (la karkariyey oo la qaboojiyey, ama la miiray).
Khamrigu waa qaybta shaqada qabta. Hydrogen peroxide waxay u jirtaa oo kaliya inay disho kudka bakteeriyada ee laga yaabo inay wasakhayso badeecada dhamaadka ah.
Waxa kale oo aad ku beddeli kartaa "waxyaalo kale oo dareen-celin ah" meesha glycerol ee ku jira gacmo nadiifiyahaaga gurigaaga ah. Halkan waa meesha aad wax ku dari karto si aanu nadiifiyahaagu u engegin maqaarkaaga aad u badan. Aloe vera jel waa hal talo. (Taasi waa waxa Science Popular la isticmaalo.)
Laakiin run ahaantii, saabuun iyo biyo ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu dhaqo gacmahaaga (iyo xitaa iPhone kaaga). Ma aha oo kaliya wax ku ool ah, laakiin waa raqiis, waxay u badan tahay inaad hore u haysatid wax badan. Taasi waxay la macno tahay inaad uga tagi karto saadka jelka nadiifiyaha ee dadka runtii u baahan.
Bing waxay aqbashaa xogta habaysan ee Ogeysiinta Gaarka ah ee COVID-19
[Daawo] Si Toos Ah Ula Socota Dhulka Matoorka Raadinta: SEO-yada ugu Sareeya waxay ka hadlaan kacdoonka COVID-19, dhaqdhaqaaqa taraafikada iyo in ka badan